Masinina knitting boribory eropeana
Volom-borona misy kofehy telo
Masinina knitting boribory Version Asia
Haben'ny vatana tokana
Single Width Width
Haben'ny vatana avo roa heny
Double Width Width
Masinina am-patotra tsy misy siny
Sombin-tsarimihetsika boribory boribory
Kitapo niova fo
Torolàlana momba ny kofehy
Air Pipe & Sodina Pipe
Sokiro sy fihenjanana
Fianarana momba ny fanomanana lamba vita amin'ny asidra Hyaluronic Acid
Ny molekiola Hyaluronic acid (HA) dia misy vondrona hydroxyl be dia be sy vondrona polar hafa, izay afaka mandray rano manodidina ny 1000 heny noho ny lanjany toy ny "spaonjy molekiola". Mampiseho ny angon-drakitra fa ny HA dia somary avo ny hamandoana ao ambanin'ny hamandoana ambany (33%), ary ny havany ...
Tao anatin'ny 4 volana voalohany, nitombo 33% ny fanondranana lamba sy akanjo tany Sina.
Araka ny antontan'isa avy amin'ny General Administration of Customs, ny volana janoary ka hatramin'ny aprily tamin'ity taona ity, ny fanondranana lamba sy fitafiana nasionaly dia nahatratra 88,37 miliara dolara amerikana, fiakarana 32,8% isan-taona amin'ny taona (raha misy RMB, fiakarana 23,3% isan-taona- amin'ny taona), izay 11,2 isan-jato isa ambany ...
Inona avy ireo anton-javatra mifandraika amin'ny lesoka mitsivalana sy marindrano amin'ny lamba grika?
Ny lesoka maro amin'ny lamba grika dia misy fitsipika voafaritra, ary mora ny mahita ny antony mahatonga ny lesoka mifanaraka amin'ny fitsipika. Ny toetra mampiavaka ny lesoka mitsivalana sy marindrano amin'ny lamba volondavenona dia manome fomba haingana hahitana ny fototr'ireo lesoka. Ny lesoka mitsangana ...
[Torohevitra] Inona avy ireo antony mahatonga ireo sosona miafina miafina rehefa manjaitra eo amin'ny masinin-damba boribory? Ahoana no hamahana?
Ny tsipika miafina mitsivalana dia manondro ny trangan-javatra miova ny haben'ny loop mandritra ny fiasan'ny milina fametahana boribory mandritra ny herinandro, ary ny elanelana lava sy ny tsy fitoviana dia miforona eo ambonin'ny lamba. Antony Tao anatin'ny toe-javatra mahazatra, ny famokarana hor ...
Sehatra haino aman-jery vaovao no hampifandray ireo mpampiranty sy mpihaino ampitan-dranomasina amin'ny fampirantiana iarahan'ny milina Textile Joint 2020
Miaraka amin'ny fampidirana lalina ny indostrian'ny lamba sy ny toekarena dizitaly, teraka ny sary marobe, modely vaovao, ary endrika orinasa vaovao. Ny indostrian'ny lamba sy ny fitafiana ankehitriny dia efa indostria mavitrika indrindra amin'ny fanavaozana ny maodely toy ny fampielezana mivantana sy ny e-varotra. Ny 2 ...
Toko 2: Ahoana ny fihazonana ny milina fanjairana boribory isan'andro?
Lubrication ny milina knitting boribory A. Zahao ny fitaratra haavon'ny solika eo amin'ny lovia masinina isan'andro. Raha ny haavon'ny solika dia ambany noho ny 2/3 amin'ny marika dia mila manampy menaka ianao. Mandritra ny fikojakojana antsasaky ny taona, raha hita ao anaty menaka ny tahiry dia tokony soloina menaka vaovao ny menaka rehetra. B. Raha ny tr ...
Toko 1: Ahoana ny fitazonana ny milina fanaovana baoritra boribory isan'andro?
avy amin'ny admin tamin'ny 21-04-05
1.Ny fikojakojana isan'andro ny milina fanaovana baoritra boribory (1) Fikojakojana isan'andro A. Amin'ny fiovan'ny maraina sy afovoany ary hariva, ny fibres (manidina) mifatotra amin'ny creel sy ny masinina dia tsy maintsy esorina hitazomana ireo singa voarindra sy ny fisintomana ary ny familiana rafitra madio. B. Rehefa manolotra fiovana, c ...
Ahoana no hamahana ny olan'ny toerana misy solika eo ambonin'ny lamba mandritra ny fanenomana?
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-03-30
Mino aho fa orinasa maro mpanenona no hahita olana toy izany amin'ny fizotra fanenomana. Inona no tokony hataoko raha misy faritra misy menaka hita eo ambonin'ny lamba mandritra ny fanenomana? Ka avelao aloha isika hahatakatra ny antony mahatonga ny toerana misy solika sy ny fomba famahana ny olan'ny toerana misy menaka eo ambonin'ny lamba mandritra ny tenona. ★ ...
Torohevitra momba ny Cam
Inona avy ireo olana tokony hojerena rehefa mametraka ny valizy sy ny valizy misy varingarina? Rehefa apetraka ny cambox dia zahao tsara aloha ny elanelana misy eo amin'ny cambox tsirairay sy ny silinder (dial) (indrindra aorian'ny fanoloana ny silinder), ary apetaho milahatra ny cambox mba hialana amin'ny ...
Fanazavana amin'ny antsipiriany momba ny kilema mahazatra 4 amin'ny spandex vita amin'ny lamba rongony
Ahoana ny famahana ny lesoka izay mora miseho amin'ny famokarana lamba spandex knitted? Rehefa mamokatra lamba spandex amin'ny milina fanjairana boribory lehibe dia mora tratran'ny trangan-javatra toy ny spandex manidina, mivadika spandex ary spandex vaky. Ny antony mahatonga ireo olana ireo dia voadinika etsy ambany ...
Uster dia mamoaka kofehy vaovao Uster Quantum 4.0 mazava kokoa
Tamin'ny 4 martsa 2021, Uster Technology (China) Co., Ltd. dia nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety Quantum 4.0 vaovao mazava kokoa. Ny kiran'ny Quantum 4.0 vaovao-mazava kokoa dia manambatra zava-baovao miaraka amin'ny sensor capacitive sy sensor photoelectric mba hamoronana singa mpamantatra. Ho an'ny karazana kofehy isan-karazany, capaciti ...
Mampiasa ny teknolojia AI hanomezana lanja ny detection volo fibres
Ny karazana sy ny isan-jaton'ny fibre ao anaty lamba dia singa lehibe manimba ny kalitaon'ny lamba, ary izy ireo koa no jeren'ny mpanjifa rehefa mividy akanjo. Ny lalàna, lalàna ary antontan-taratasy fanamarinana mifandraika amin'ny marika lamba amin'ny firenena rehetra manerantany ...
ZESA INDUSTRY HESHI, DISTRIKA LUOJIANG, TANANANAN'NY QUANZHOU, FUJIAN PROVINCE.CHINA